2 Samoela 1 - Ny Baiboly
2 Samoela toko 1
Nandre Davida fa maty Saola sy Jonatasy - Hira momba an'i Saola sy Jonatasy.
1Nony maty Saola dia niverina avy nandresy ny Amalesita kosa Davida ka hatramin'ny andro roa Davida no nipetraka tao Sikelega. 2Tamin'ny andro fahatelo, inty nisy lehilahy anankiray, avy tany an-toby, avy tany amin'i Saola, ary ny akanjony rovitra, ny lohany norarahan-tany, ary nony mby teo amin'i Davida izy dia nidaboka tamin'ny tany, ka niankohoka. 3Hoy Davida taminy: Avy aiza hianao? Ary hoy ny navaliny azy: Nandositra avy tany an-tobin'Israely aho. 4Dia hoy Davida taminy: Ka nanao ahoana avy? Tantarao amiko kely hoe. Ary hoy izy: Nandositra tamin'ny ady ny vahoaka, ka be no nitsingidina sy maty tamin'ny vahoaka, ary maty koa aza Saola sy Jonatasy zanany. 5Hoy Davida tamin'ity zatovo, nilaza izany zava-baovao izany taminy: Ahoana no ahafantaranao fa maty Saola sy Jonatasy zanany? 6Ary izao no navalin'ilay zatovo nilaza ny vaovao taminy: Sendra tany an-tendrombohitra Jelboe aho, no inty Saola nitehina tamin'ny lefony teo, efa saika tratry ny kalesy sy mpitaingin-tsoavaly mihitsy; 7niherika izy ka nahatazana ahy dia niantso ahy, sy nolazaiko hoe: Inty aho. 8Ary hoy izy tamiko: Iza moa hianao? Ka hoy aho namaly azy: Amalesita aho. 9Dia hoy izy tamiko: Avia aty akaikiko ary vonoy ho faty aho; fa efa fanina aho ity, nefa ny aiko manontolo mbola ato amiko. 10Dia nanatona azy aho, ka namono azy satria fantatro fa tsy ho velona intsony izy rahefa resy. Koa nalaiko ny satrok'andriana teny an-dohany sy ny fehin-tànana teny amin'ny sandriny, dia indreto nentiko nankaty amin'ny tompoko.
11Dia noraisin'i Davida ny fitafiany, ka notriariny ary nanao toy izany koa ny olona rehetra teo aminy. 12Nanao ny fombam-pisaonana azy ireo izy, nitomany sy nifady hanina mandra-paharivan'ny andro, nisaona an'i Saola sy Jonatasy zanany ary ny olon'ny Tompo sy ny tranon'Israely, satria lavon-tsabatra izy ireo. 13Ary hoy Davida tamin'ity zatovo nilaza ny vaovao taminy: Avy aiza no tany fihavianao? Hoy ny navaliny azy: Izaho dia zanaky ny olona hafa firenena, dia olona Amalesita. 14Ary hoy Davida taminy: Nahoana hianao no dia tsy natahotra ny haninji-tànana hamono ny voahosotry ny Tompo? 15Sady niantso ny anankiray tamin'ny tovolahy Davida ka nanao hoe: Avia, vonoy io. Dia nasiany, ka maty. 16Ary hoy Davida taminy: Aoka ny ranao ho eo an-dohanao, satria vavanao ihany no niampanga anao, fony hianao nanao hoe: Izaho no namono ny voahosotry ny Tompo.
17Noventesin'i Davida ity hira fisaonana an'i Saola sy Jonatasy zanany ity, 18ka nasainy nampianarina ny zanak'i Jodà izany. Io ilay hira hoe: Tsipìka. Indro fa voasoratra ao amin'ny Bokin'ny Marina izany:
19Moa levona teny amin'ny tamponao va ny famirapiratr'Israely?
Ahoana no nahalavoan'ny mahery?
20Aza ambaranareo any Geta izany,
na torinareo any amin'ny araben'i Askalona,
fandrao mifaly amin'izany ny zanakavavin'ny Filistina,
fandrao mibita-kavaliana ny zanakavavin'ny tsy mifora.
21Hianareo tendrombohitra Jelboe,
aza misy andro aman'orana intsony eo aminareo
na saha fisantaram-bokatra!
Fa teo no nahararaka an-tany ny ampingan'ny mahery.
22Ny ampingan'i Saola tsy mba diloilo no nahosotra azy
fa ny ran'ny maratra sy ny tavin'ny mahery;
ny tsipìkan'i Jonatasy tsy lasa nihemotra na oviana na oviana
ary ny sabatr'i Saola tsy nody maina.
23Malala sy mahate-ho tia Saola sy Jonatasy,
fony fahavelony, ary teo am-pahafatesany dia tsy tafasaraka.
Mailaka noho ny voromahery izy,
mahery noho ny liona.
24Mitomania an'i Saola, ry zanakavavin'Israely,
fa notafiany jaky tao anatin'ny fahafinaretana hianareo;
noravahany volamena ny fitafianareo!
25Ahoana no nahalavoan'ny mahery tany an'ady?
Voagorobaka teo amin'ny havoanao Jonatasy!
26Trotraky ny alahelo anao aho, ry Jonatasy rahalahiko!
Fa hianao ihany no fahafinaretako tanteraka;
mamiko noho ny fitiavan'ny vehivavy ny fitiavanao.
27Ahoana no nahalavoan'ny mahery?
Ahoana no nahafatesan'ny mpiady? >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3756 seconds